Maamulka Gobolka Togdheer iyo Gudiga Nabadgelyadda Oo Soo Saaray Go’aamo Lagu Adkaynayo Nabadgelyadda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Maamulka Gobolka Togdheer iyo Gudiga Nabadgelyadda Oo Soo Saaray Go’aamo Lagu Adkaynayo Nabadgelyadda
Published on October 4, 2017 by sdwo · No Comments
Burco (SDWO): Kulamo la xidhiidha sidii loo adkayn lahaa hawlaha nabadgelyadda, isla markaana loogu diyar garoobi lahaa ololaha doorashadda madaxtooyadda oo ay maalmihii u danbeeyay yeesheen gudiga nabadgelyadda gobolka Togdheer ayaa laga soo saaray go’aamo la doonayo in lagu hawl gallo.
Shir ay shalay isugu yimaadeen gudiga nabadgelyadda gobolka Togdheer, oo uu goob joog ka ahaa badhasaabka gobolka iyo ku-xigeenkiisa, guddoomiyeyaasha heerarka kala duwan ee maxkamadaha gobolka, xeer ilaalinta iyo hogaanka saddexda xisbi ee gobolka ayaa lagaga dhawaaqay go’aamadaasi.
Badhasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax), ayaa sheegay in go’aamadani ay yihiin kuwo la isla qaatay kadib markii mudooyinkan ay gudiga nabadgelyadda gobolku shirar kala duwan arrimahaasi ka yeesheen.
Maxamuud Cali Saeebaan (ramaax) waxa kaloo uu sheegay in go’aamadani ay yihiin qaar la xidhiidha sidii loo fulin lahaa awaamiirta madaxweynaha ee xiliga doorashadda iyo u diyaar garowgeedaba.
Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Shir dheer oo maalmahanba ay ku jireen gudiga nabadgeliyadda gobolku, waxay ka soo saareen go’aamo badan oo ah sidii loo fulin lahaa awaamiirta madaxweynaha ee ku waajahan xiligan aynu ku jirno iyo hawshii joogtadda ahayd ee ay ugu horayso naabdgelyadu, sidii loo dar-dar gelin lahaa.
Sidoo kale u diyaar garowga hawlaha inagu soo foolka leh, sidii gacan loo siin lahaa komishanka doorashooyinka qaranka iyo hab-sami u socodka doorashadda”.
Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaanle dhexe Cabdi Cali Xayd, ayaa isna tilmaamay in go’aamadani ay yihiin kuwo ay si buuxda isula qateen gudiga naabdgelyadda gobolka, saddexda derejo maxkamadeed iyo xeer ilaalintuba.
Waxaanu intaas ku daray ay ka ciidan ahaan ka go’antahay fulinta qodobadani. Waxaanu yidhi “Gudiga naabdgelyadda gobolka, saddexda maxkamadood ee derejadda kowaad, maxkamadda sare iyo maxkamadda gobolka, xeer ilaalilnta ciidamadda iyo xeer ilaalinta gobolka” .